Barashada xagaaga waxay noqon kartaa mid xiiso leh! | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Juun 2 , 2021
Ma waxaad raadineysaa qaabab aad uga ilaalin karto carruurtaada inay waxbartaan xagaagan? Ka raadi astaamaha Fikradaha Barashada Xagaaga Clever si aad uga hesho xiriiriyeyaal buugaagta elektaroonigga ah, ciyaaraha, fiidiyowyada iyo waxqabadyada ardayda dugsiga hoose. Websaydhku wuxuu soo bandhigayaa ilo badan oo kala duwan si ilmahaagu ugu mashquulsanaado isagoo sii wadaya dhisidda xirfadahooda waxbarasho. Halkii iska dejiso oo ku raaxeyso xagaagan? Taasi waa OK, sidoo kale! Akhrinta 6 buug oo sax ah xagaaga xagaaga ayaa laga yaabaa inay ka ilaaliso akhristahaaga da'da yar inuu dib u noqdo.